ISOFTWARE YOYILO LWECLOSET (EYONA NKQUBO ILUNGILEYO ISIMAHLA YAMA-21 KUNYE NENTLAWULO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Isoftware yoyilo lweCloset (eyona nkqubo ilungileyo isimahla yama-21 kunye neNtlawulo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwisoftware eyi-15 efanelekileyo yoyilo kubandakanya isimahla, ihlawulwe, i-3D, iiapps kunye neenkqubo ezikwi-Intanethi.
Eli nqaku liza kukunika eyona software intle kakhulu yoyilo kwi-intanethi ukukunceda ekuyileni nasekucwangciseni ikhabethe lakho lasekhaya elinokonga imali kwaye lenze lula ubomi bakho.
Nokuba uyakha indlu yakho yamaphupha okanye uhlengahlengisa ikhaya lakho, ufuna ukuba abaququzeleli bakho bekhabethe benze ngokufanelekileyo kwaye balungelelane nesimbo sakho. Ukucinezeleka kwakhona kwaye ufezekise iinkqubo zokugcina isisombululo samaphupha akho ezandleni zakho.
Ngokutyala nje ixesha lakho elincinci, ungazenzela ukufikelela ngaphakathi okanye ungene kuyilo lwekhabethe usebenzisa isoftware yomququzeleli we-closet yasimahla kwi-intanethi.
Isoftware yoyilo yasimahla
Abaququzeleli beCloset eMelika
Isixhobo soBeko lweKhaya seDepho yasekhaya
Umcwangcisi wePax Pax
Isoftware yoyilo kwi-Intanethi
Isixhobo se-Elfa Closet Design nguVenkile weContainer
Isixhobo soYilo lweCloset yokuPhila
UmCwangcisi weCloset 3D we-Android
Sketch Arm-3D Closet Designer 2.0 yefowuni
EZ I-Closet +
Isoftware yoyilo lwe3D
UmCwangcisi weProBoard Closet
Ikhabethe CAD Pro
Uyilo lwasekhaya i-3D (yoyilo olusisiseko lwangaphakathi loyilo)
I-ClosetPro (yeShishini kunye neeWebhusayithi)
Isoftware yoyilo ehlawulweyo
Umcwangcisi 5D-Ikhaya kunye noyilo lwangaphakathi
Isoftware yoyilo oluGqibeleleyo
Akukho mntu ufuna ukuchitha iminyaka ezama ukufumana ihempe elungileyo okanye iimpahla zakhe zisasazeke kuyo yonke indawo. Ukuxinana kunye nobumdaka bunokubangela uxinzelelo olukhulu; kodwa ikhabethe elungiswe kakuhle okanye indawo yeewodrobe yenzela ingqondo elungelelanisiweyo.
Nangona ukuqesha umyili wezinto zangaphakathi ukuyila kunye nokucwangcisa ukuhamba-ngaphakathi okanye ukufikelela kwi-closet yeyona nto ilungileyo, inokubiza kakhulu. Ngethamsanqa, abaninimzi ngoku banokwenza ngokwezifiso kwaye bayile iikhabhathi zabo besebenzisa isoftware yoyilo yasimahla abanokuyisebenzisa kwi-Intanethi kwaye bakwazi ukuguqula amaphupha abo e-closet abe yinyani.
Ezi nkqubo zineenguqulelo zasimahla ezikhoyo. Nangona kunjalo, uninzi lwazo lunezinto eziphambili ezinje ngemifanekiso eyongezelelweyo, imibala kunye nezitayile zoyilo ngasemva kwenguqulo ehlawulelweyo.
I-EasyClosets yinkampani yekhabethe yesiko ebonelela ngomgangatho ophezulu, ixesha elide, umbutho wekhabethe yesiko kunye nenkqubo yokugcina. Izixhobo ze-EasyClosets kunye neziqwenga zehardware ziyilelwe ukufakelwa ngokwakho okunceda abathengi ukuba bonge enkulu kwiprojekthi.
I-EasyClosets ikwanaso nesixhobo sokucwangcisa simahla kwi-intanethi kunye nesixhobo sokuyila esivumela abathengi ukuba bayile ezabo iikhabhathi, iingubo kunye nokugcinwa. Esi sixhobo yoyilo senza ukuba kube lula ukwenza ngokwezifiso ukubonelela ngemilinganiselo, ukukhetha izinto, imibala kuqwalaselo lwezinye izinto zombutho.
Ikwabonelela ngohlaziyo loyilo lwasimahla kunye neengcebiso ezivela kwiqela labo loyilo lobuchule ukunceda abathengi ukuba baphinde bajonge ukuba yonke into iyangena kwaye zonke iiodolo ziya kusebenza kwisithuba esibonelelweyo. Ukuhlaziywa kwamaxabiso aphilayo kuyafumaneka kwaye uku-odola ikhabethe elungelelanisiweyo ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yabo akukho xinzelelo.
I-EasyClosets Tutorial yeVidiyo
Iwebhusayithi yokuVala ngokulula: https://www.easyclosets.com/design/
Abaququzeleli beCloset eU.SA baququzelela inkonzo yokuyila yasimahla ekhompyutheni ukunceda abaninimzi ukuba bayile eyabo inkqubo yekhabethe besebenzisa isixhobo seCloset Organisers USA.
Kwangelo xesha, abaninimzi banokhetho lokufumana inkxaso kumyili wezithuba zobungcali bokunyusa nawuphina umbutho wekhabhathi kunye nendawo yokugcina.
Ngokugcwalisa iphepha lemibuzo eliyilo kwikhabethe kwi-intanethi, ifom inokugcinwa kuzo zonke izixhobo ezinje nge-desktop, ithebhulethi kunye ne-smartphone kwaye emva koko uthumele i-imeyile ku-design@closetorganizersusa.com kwaye ulindele ukubuya kwemizobo ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Esi sixhobo yoyilo silula kwaye sikhuselekile ukusebenzisa.
Abaququzeleli beCloset eU.SA isixhobo sokuyila senza isakhelo esihle sekhabethe sisebenzisa izikhokelo zokulinganisa kunye neziseko zoyilo.
Ngokucaciswa kweeyunithi zomququzeleli we-closet, abaninimzi bayakwazi ukwakha abaququzeleli beekhabethe zesiko kwiindawo zokuhamba-ngaphakathi, iindawo zokungena ngaphakathi, iishelufa zephenti, ii-closets zelineni, ishelfu yeofisi okanye naliphi na ikhaya okanye indawo yeofisi efuna ukuququzelelwa.
Abaququzeleli beCloset e-USA: https://you-design.closetorganizersusa.com/weblogin.aspx
I-Depot yasekhaya ibambisene ne-SimplyNeu ukubonelela ngesixhobo sokwakha sasimahla kwi-intanethi. Ukuqalisa ukhetha ukufikelela okanye ukungena kwimo yekhabethe. Emva koko ngenisa imilinganiselo yakho kumagumbi okugcina kwaye ukhethe kulungelelwaniso olwahlukeneyo lokugcina ukubona iprojekthi yakho.
Iinkonzo ze-E-design ziyimakethi ekhulayo, kwaye iDepho yaseKhaya inika eyona nkonzo ibalaseleyo kubathengi babo ngokusebenza ngokuthe ngqo nengcali kuyilo labasebenzi ukunceda abathengi ekwenzeni inkqubo ye-closet eyenzelwe wena ukusuka kuthethwano lokuqala ukuya kutyhilwa okokugqibela kuyilo lwekhabethe, ngokupheleleyo simahla.
Esi Sixhobo soBeko lweDepho yaseKhaya siyafikeleleka kwi-intanethi ngaphandle kokukhutshelwa okufunekayo. Ivumela abathengi ukuba bakhethe igumbi abanomdla kulo ekuyileni kwaye bakhethe iphakheji yoyilo enokwenziwa ngokusetyenziswa kwezixhobo, ukubonelelwa kunye noluhlu olwandayo lweemveliso esele zilungile ezivela eDepho yasekhaya.
Isixhobo sokuyila siyakwazi ukuqikelela kwangoko ixabiso loyilo lwekhabhathi okanye sincede abathengi bayile isisombululo esiza kulungela iimfuno zabathengi kunye nohlahlo-lwabiwo mali.
Isixhobo seKhaya leDepho yesiXhobo seKhaya: http://www.simplyneu.com/start-design/closet/
Isicwangcisi se-IKEA Pax sisicelo esikwisikhangeli esakhelwe usebenzisa iFlash, ke khetha isikhombisi ngobulumko- kuba ngoku i-Chrome isebenza ngcono; Unokufumana iiplagi-ins zeFirefox kunye neInternet Explorer. Isicwangciso se-IKEA Pax asifumaneki kwii-iPads / iPhones ngenxa yokuba isebenza ngokukhawuleza.
Kwangelo xesha, i-IKEA Pax Planner sisisombululo sewadi yonke kunye nenkqubo yokuyilwa kweewadi kwiitayile ezininzi kunye nemisebenzi enokwenziwa ngokwezifiso evumela abathengi ukuba babeke naliphi na igumbi abafuna ukuyila.
Abathengi bangaqala ngolunye lwendibaniselwano esele yenzelwe. Ukongeza, umntu unokwakha ukufikelela kwakhe kuyilo lwekhabethe ukusuka ekuqaleni ngokubonelela ngemilinganiselo echanekileyo yendawo kumhlaba wobukhulu.
Le app yoyilo inikezela ngeendlela ezininzi zokucwangcisa kunye nokwenza iinkqubo zekhabethe ngokuxhomekeke kwiimfuno kunye nesitayile sabo; njengoko zininzi izinto zekhabhathi kunye nezinto ezinokukhethwa kwimveliso onokukhetha kuzo.
Ikea Pax isiCwangciso seWebhusayithi: https://www.ikea.com/us/en/planner/pax-planner/
Ezi zixhobo zilandelayo zoyilo ezikwi-Intanethi zivumela abasebenzisi ukuba bazenzele ngokwabo uyilo lwe-closet; emva kokungenisa uyilo lwazo esi sixhobo sikwi-intanethi sibala amaxabiso enkqubo yonke ye-closet kwaye sinika abasebenzisi ithuba lokuthenga inkqubo yabo yasesirowuthini kulaba bavelisi.
Ivenkile yeContainer yenye yezona zinto ziphambili ezithengisayo kwindawo yokugcina izinto kunye neemveliso zombutho eMelika. Njengenxalenye yeenkonzo zabo zabathengi abazinikeleyo, benze isisombululo esiza kwenza abathengi babo ukuba bonge ixesha ngokubonelela simahla ngaphakathi okanye ngaphakathi. Banikezela ngesixhobo esenziwe kwi-intanethi kwi-closet- uElfa.
Esi sisoftware yoyilo esebenzisekayo evumela abathengi ukuba bayile ikhabethe yabo yokufikelela ngokubonelela ngemilinganiselo yendawo yokugcina izinto kunye nokwenza uyilo ngokwezifiso besebenzisa isixhobo se-Elfa yekhabethe yoyilo kunye nethemplethi yesiko yokuqinisekisa okulingana nayiphi na indawo yekhabhathi, uhlahlo-lwabiwo mali kunye nesitayile kwimizuzu .
Nje ukuba abathengi bazilungiselele kwaye bayile indawo yabo ye-closet, ngoku banokuthenga ikhabethe labo ngokuhambisa indlu ngendlu okanye bafumane ivenkile kwi-Intanethi ye-Order Order Curbside Pickup. I-elfa ™ ikwabonelela ngenkonzo yokuFakelwa okanye abathengi banakho ukhetho lokufaka ii-elfa ™ iikhabhathi ze-DIY.
Isixhobo se-Elfa Closet Design Tool: https://www.containerstore.com/design-center/walk-in-closet-design-tool
I-Closets to Go ibonelela ngesixhobo esenziwe lula se-closet kwi-intanethi evumela abasebenzisi ukuba benze ikhabethe okanye iprojekhthi yoyilo ye-wardrobe ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni ngokwemigaqo yomsebenzisi.
Le nkqubo yoyilo ekwi-Intanethi ivumela abasebenzisi ukuba bakhe, bagcine kwaye benze iinguqu kuyilo.
Xa banelisekile, abasebenzisi banokugcina uyilo lwekhabethe olwenziwe ngokwezifiso kwaye inkampani yoyilo lwangaphakathi lwenkampani inokujonga kwaye ihambe kubasebenzisi ngenkqubo yokuthenga inkqubo yekhabethe esandula ukuyilwa.
Ukuvalwa ukuya kwiVidiyo yeTutorial
Ukuvalwa ukuya kwiWebhusayithi: https://www.closetstogo.com/
IiClosets.com zibonelela abathengi ngokusetyenziswa simahla kwesixhobo sabo sokuyila esine-intanethi ngamaxabiso exabiso akhawulezileyo ajolise ekukhokeleni abathengi ekudaleni uyilo kunye nenkcazo. Abathengi banako ukubona uyilo lwabo olunikezelwe kwi-3D.
Kubathengi abakhetha ukuba indawo yabo yekhabethe iyilelwe ngabaqulunqi babo abangaphakathi endlwini, iClosets.com ibonelela ngenkonzo yoyilo enobuchule nesimahla kubo bonke abathengi.
Siyathemba ukuba isoftware eyahlukileyo yoyilo, esiyibonakalisileyo kweli nqaku iya kukunceda ugcine ixesha ekwenzeni uyilo olugqibeleleyo lokugcina uyiphupha lakho ngokuyila ikhabethe yakho kwikhompyuter yakho kwinduduzo yekhaya lakho.
Iindidi ezininzi zesoftware yoyilo lwekhabethe ziya kukuvumela ukuba ubone ixabiso lilonke kwaye ngokufanelekileyo utshintshe uhlaziyo ngalunye olwenzayo kuyilo lwakho. Ngokusebenzisa isoftware eyahlukileyo yoyilo okanye usetyenziso, uyakwazi ukuphanda ukuba leliphi elona xabiso lilungileyo kuwe; yiyo loo nto, ukonga imali.
Ngokusebenzisa isoftware yoyilo kwi-intanethi okanye ngaphandle kweintanethi, uya kuba nethuba lokuthintela iimpazamo ekubeni zenzeke ngelixa uzama ukugcwalisa uyilo lobomi bokwenyani.
Ukuba kunokwenzeka, ukhetha ukuqesha iinkonzo zenkampani yokwenza imveliso ye-closet kuqinisekile ukuba baya kwakha isisombululo esifanelana neemfuno zakho zoyilo. Aba bayili bangaphakathi beengcali baya kukukhokela ekufumaneni kanye le nto uyifunayo, eya kulungela indawo yakho.
Iwebhusayithi yeClosets.com: https://www.closets.com/design
Enye inkonzo ebalaseleyo kwi-Intanethi yindlela elula yokulandelela, sisixhobo sesoftware somsebenzisi esisebenziseka lula esinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zemveliso yombutho.
Esi sixhobo yoyilo sivumela abathengi ukuba bazobe isicwangciso somgangatho, baxube kwaye batshatise icandelo ngalinye lekhabethe besebenzisa izixhobo zabo zombutho kwaye benza abathengi ukuba bagcine uyilo lwabo.
Ikwavumela abathengi ukuba bongeze ukhetho lwabo lwezixhobo, jonga uhlaziyo lwamaxabiso aphilayo kuyo yonke inkqubo yoyilo. Ukulandelela ngokulula kukwabonelela ngenketho yokuvelisa uluhlu lweemveliso kunye nezinto ezinokuthengwa kumthengisi weTrack Track okanye kubathengisi abathembekileyo.
Ividiyo yokuKhangela ngokuLula
Iividiyo ezongezelelekileyo ezibonelela ngemiyalelo yenyathelo ngenyathelo ngendlela yokufaka inkqubo yekhabethe ziyafumaneka kwiwebhusayithi okanye kwisitishi seYouTube ..
Iwebhusayithi ye-EasyTrack: https://design.easytrack.com/
Ukwenza ngokwezifiso iimfuno ezichanekileyo zokufaka ikhabethe elitsha okanye inkqubo yokugcina yenziwe yenziwa kwaye kube lula yiClosetMaid enikezela ngesixhobo ekulula ukusisebenzisa esisebenzisa kwi-intanethi kunye neenkqubo zazo ze-DIY kubandakanya i-SpaceCreations kunye neSuiteSymphony.
Oku kuvumela abathengi ukuba bayile ikhabethe yabo yamaphupha kwaye baguqule nayiphi na indawo yekhaya labo ngezisombululo ezinokwenziwa ngokwezifiso ukuze zilungele zonke iimfuno zabo zokugcina.
Le app yoyilo ivumela abathengi ukuba bakhethe uhlobo lwekhabethe abalifunayo- ukuhamba-ngaphakathi kwe-wardrobe ye-wardrobe, ikhabethe yokufikelela okanye ubeko lwesithuba sendawo.
Ngokusekwe kulwazi olunikezelwa ngumthengi, isixhobo soyilo sibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuyila abathengi abanokukhetha kuzo ukwenza isitayile sabo sokuyila sephupha.
Abathengi banokugcina kwaye baprinte uyilo lwabo okanye babe nokukhetha ukuthenga kwi-Intanethi. IClosetMaid ikwabonelela ngeeNkonzo zoYilo lobuGcisa. Oku kuvumela abathengi ukuba bangenise uyilo olugciniweyo, baphendule imibuzo yoyilo kwaye kwiintsuku ezimbalwa baya kufumana ukwahluka koyilo lobuchwephesha kubandakanya uluhlu lwenxalenye yemveliso kunye nokhetho lokuba ungazithenga phi- zonke ezi ziyi- $ 5 kuphela.
IWebhsayithi ye-Closet Maid: https://closetmaid.com/
Ukuphila okuCwangcisiweyo kubonelela ngobume bobuchwephesha, obulula ukusebenzisa isiXhobo soYilo se-Intanethi sokwenza ikhabethe egqibeleleyo kunye nokubonelela abathengi babona mbutho ungcono wasekhaya kunye nesisombululo sokugcina.
Isixhobo esiLungelelanisiweyo sokuPhila kwi-Intanethi sisixhobo esinamacandelo amaninzi, ukusebenza ngokupheleleyo kwephaneli yolawulo eyenza ukuba abathengi bajikeleze kwaye banike ikhabethe ukujonga i-engile nganye yoyilo lwe-closet yabo.
Inika izitayile ezenziwe ngokwesiko ukusuka kusisiseko ukuya kuyilo olupakishwe ngokupheleleyo kwaye ivumela umsebenzisi ukuba ongeze kwizixhobo zesiko okanye enze uhlengahlengiso.
Esi sixhobo yoyilo sivumela abathengi ukuba bayile ikhabethe yabo yesiko kwidesktop okanye ithebhulethi yabo kwaye bathumele uyilo kwiqela labo loyilo lobuchwephesha ukuze baphonononge. Ukuyilwa kwabathengi kungagcinwa, kuhlelwe, kwabelwane ngako, kuprintwe okanye kuthunyelwe nge-imeyile.
Isifundo seVidiyo esiPhila
IWebhusayithi eHlanganisiweyo yoLuntu https://designer.organizedliving.com/onboarding/Bedroom%20Closet
Ezi zixhobo zilandelayo zoyilo zekhabethe zisebenza kakuhle kwizixhobo zefowuni ezinje nge-Android okanye i-Iphone. Uhlobo lwesixhobo le nkqubo iyahambelana nalo ngqo kwinkcazo.
Isicwangcisi seCloset 3D sisicelo sesoftware sasimahla esinokusetyenziswa ngokulula ngabo bobabini abayili abaziingcali nabalulamileyo. Okwangoku, le software yoyilo lwe-3D iyafumaneka ngesiNgesi kwaye inkqubo inokufakwa kwizixhobo ezisebenzisa i-Android njengenkqubo yokusebenza kwayo.
ICloset Planner 3D inguqulelo yamva nje ye-2.7.1 ine-12.58MB yesayizi yefayile kwaye iyafumaneka ukuze ikhutshelwe kwi-https: //www.soft112.com/ phantsi kwecandelo leCandelo loNzala kwaye njengenxalenye yodidi lweKhaya kunye neHobby.
Isicwangcisi seCloset 3D 2.7.1 ivumela ukuyila zonke iinkcukacha zekhabethe eyenziwe ngokwezifiso ngexesha lokwenyani. Imisebenzi ekhoyo yahlulwe yinguqulelo ezimbini- Inguqulelo yasimahla kunye nepro Pro.
Inguqulelo yasimahla ivumela umsebenzisi ukuba ahlengahlengise umxholo we-wardrobe ezinje ngeeshelfu, izahlulelo, iipatografi, iibhasikiti kunye nezinye iimodyuli. Ikwavumela umsebenzisi ukuba acwangcise iingcango ezilahlayo ezinjengesipili, ibhodi yamasuntswana kunye neglasi.
Le nguqulo ikwanamagumbi, umgangatho kunye nodonga lombala oseto. Elinye inqaku lolu hlobo lwasimahla kukuba ivumela ukugcina imifanekiso yewadi kunye nokuvulwa kweprojekthi kunokwenzeka.
Kwelinye icala, uguqulelo lwe-Pro olunemisebenzi efanayo naleyo yohlobo lwasimahla, longeze izinto ezinje ngokubonisa ubungakanani beeshelfu kunye nobukhulu bayo.
Inguqulelo yePro yenza ukuba umsebenzisi akwazi ukurhoxisa isenzo esenza ukuba kube lula ukwenza utshintsho kuyilo. Le nguqulo ikwavumela ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kweprojekthi yokuhambisa ifayile phakathi kwezixhobo okanye ukuthumela nge-imeyile.
I-Closet Sketcher yevidiyo yeVidiyo
Isicwangciso seCloset 3D - Ukukhuphela kwe-Android kuGoogle Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.closetsketcher&hl=en_US&gl=US
Sketch Arm 3D Closet Designer version 2.0 sisicelo sesoftware simahla esihambelana nezixhobo zeApple Iphone.
ISketch Arm 3D Closet Designer inceda umsebenzisi ukuba ayile kwaye aqikelele kwi-3D ikhabethe elenziwe ngokwezifiso kunye ne-interface enomdla.
Esi sixhobo sokuyila sivumela abayili ukuba bahlule ngokulula ikhabethe kumagumbi, benze iishelufu kunye nezahlulelo, ongeze izixhobo, wenze ngokwezifiso uyilo lomnyango kwaye lwenze kube lula ukudibanisa iipaneli ezininzi ezinemibala eyahlukeneyo kunye nezixhobo.
ISketch Arm 3D Closet Designer ikwanemisebenzi yokunxibelelana iyonke kwaye yenza uyilo ngexesha lokwenyani. Ikwabandakanya izixhobo ezincedisayo ezinje ngokulungiswa okuzenzekelayo kwigridi yoyilo kunye nesixhobo sokuchaneka sokwenza lula kwinkqubo yoyilo.
Le software ikwabonisa ilayibrari yezincedisi, isikhokelo esisisiseko esibonisiweyo, iiprojekthi zesampulu kunye nezifundo zevidiyo zabaqulunqi beekhabhathi.
ISketch Arm 3D iyafumaneka ngesiNgesi nangeSpanish nge-iOS 6.0 njengenkqubo yokusebenza kwayo kwaye inesayizi yefayile eyi-45.72MB. Le app ihlaziyiwe yiApple eyenza ujongano lukhanye, olwanamhlanje kwaye lucacile; kwaye iyahambelana ne-iPad.
Sketch Ingalo yeVidiyo yeVidiyo:
Iyafumaneka kwi-https: //www.soft112.com/ phantsi kwecandelo lokutya kunye neSiselo nanjengenxalenye yodidi lweKhaya kunye neHobby. Sketch Arm 3D Website: www.sketch-arm-3d-closet-designer-ios.soft112.com/
Khuphela iSketch Arm kwiVenkile yeApple: https://apps.apple.com/us/app/sketch-arm-3d-closet-designer/id583013653
I-EZ Closet yenye yezona zinto zikhutshelweyo yoyilo olukhululekileyo kusetyenziso lweVenkile yeVenkile. Ivumela abasebenzisi ukuba bayile ikhabethe besebenzisa i-iPad yabo, i-iPhone okanye i-iPod. Ifuna inkqubo yokusebenza ye-iOS 8.0 okanye ingxelo yayo kamva.
I-EZ Closet yenza ukuba abasebenzisi bayile basebenzise imilinganiselo kwiimilimitha, iisentimitha, iimitha okanye ii-intshi. Ivumela abasebenzisi ukuba bakhethe ukuya kuthi ga kwiindonga ezine ezinobude obahlukeneyo kwaye vumela umsebenzisi ukuba arhuqe kwaye alahle iikhabhathi kunye nezixhobo kuyilo.
Abasebenzisi banako ukuguqula ukuphakama kwabo, ukuphakama kunye nobunzulu bekhabhinethi ngokufaka ixabiso lenkcazo echanekileyo ngakumbi; tshintsha izinto zeekhabhathi kunye nezixhobo ngokuzimeleyo; yenza indibaniselwano yezinto zodonga ngokukhetha phakathi kweepeyinti, iithayile, ukhuni kunye nemabhile.
I-EZ Closet inokuvelisa ngokuzenzekelayo uluhlu lwezinto ezifakwe kuyilo kwaye ibandakanya umphathi wefayile ukwenza ukuba abasebenzisi bakwazi ukugcina, ukuvula kunye nokucima uyilo kuzo zonke izixhobo.
Enye yezona zinto zibalaseleyo ze-EZ Closet kukwenza ukuba imizobo igcinwe njengefayile ye-DXF, enokuvulwa kwaye ihlelwe nge-AutoCAD okanye nayiphi na inkqubo yeCAD.
I-EZCloset Apple ivenkile yokukhuphela: https://apps.apple.com/us/app/ez-closet/id793734714
Olu hlobo lwesoftware lukuvumela ukuba uyile ikhabethe yakho kwi-2D kwaye uyiqwalasele nge-3D. Oku kukunika amandla okungena ngaphakathi kuyilo lwakho kwaye ubone ukuba liza kujongeka kanjani ngokungathi ubukho.
I-17Squares lolunye usiko, uyilo olusekwe kwiwebhu lwe-3D kunye nesisombululo sesoftware kwiimfuno zokwenza isithuba se-closet ezinokusetyenziswa kwikhompyuter, ithebhulethi okanye kwifowuni.
Le software inezicelo ze-3D zekhabethe kunye nendawo yokugcina izinto ezibonakalayo.
I-17Squares igxile ekuzobeni izithuba zangaphakathi kunye noqwalaselo olukhawulezayo nolula oluzenzekelayo lwalo naluphi na uyilo loyilo.
Izikwere zeWebhusayithi: https://17squares.com/
Ipro100 sisoftware esemagqabini yekhabethe yeewodrobhu, ii-closet zokuhamba, ukufikelela kwiikhabhathi, into eluncedo kunye negunjana lelinen. Kubathengisi, le software inezona zinto zinemisebenzi esebenzayo yoyilo ekuvumela ukuba ukhethe amalungu kunye nezixhobo kunye nexabiso labo ngokwahlukeneyo.
Ipro100 vumela ukuvelisa kube kulawulo lokuyila ii-closets zesiko kuba isoftware inokuvelisa umzobo wokusika ngokusekwe kwimilinganiselo yakho kwaye ube nakho ukuqikelela kunye nokubala iiprojekthi ngamacandelo okanye ngeyunithi epheleleyo ngokuxhomekeke kukhetho lwakho lokuvelisa.
Ipro100 yenza abakhi bezakhiwo kunye nabayili bayile uyilo lwabo lwekhabethe besebenzisa izixhobo ezahlukeneyo ezivela kubanikezeli ngeempahla okanye iikhabhathi zekhabethe esele zilungile ezivela kumenzi kwaye ziyilayishe kwikhathalogu yazo epheleleyo enesici sokubonisa esinokubonisa okanye ukucima, iziphumo zokukhanyisa, ukunikezelwa kwe3D, ixabiso indibaniselwano neengxelo.
I-Pro100 isebenza kakuhle kakhulu ngomatshini we-CNC osetyenziselwa ukuvelisa iikhabhathi zekhabethe.
Pro100 Indawo yeWebhusayithi: https://www.pro100usa.com/closet-design-software
Omnye umcwangcisi we-closet we-3D kwi-Intanethi yiProBoard sisisombululo esihle kwi-Intanethi kwiinkampani zefanitshala ezibandakanya ikhabethe kunye nomzi mveliso wekhitshi.
IproBoard ine-interface yomsebenzisi-enobuhlobo kunye neengcebiso zesixhobo esicacileyo kunye nokubala kwendleko okuzenzekelayo okunokuhlaziya iindleko zekhabethe ngelixa kuguqulwa uyilo lweprojekthi. Inendlela enye yesiseko sexabiso esisebenzisa ukudityaniswa nge-API kulungelelwaniso lwamaxabiso emveliso eyenza ukuba umsebenzisi alayishe uluhlu lwamaxabiso kunye nohlaziyo oluzenzekelayo.
Le software ibandakanya inkqubo yokwenza ikhathalogu yokwenza ukuba umsebenzisi enze ngokwezifiso kwaye alayishe idathabheyisi yabo yokungena kunye nokufikelela kwizinto zekhabhathi, imibala, iisistim zokutyibilika komnyango, isidumbu kunye nezinye izinto.
IproBoard inendawo ebonakalayo yokunikezela, ukuvelisa ngokuzenzekelayo kweeprofayili kwaye ibandakanye nolawulo lweendlela zekhamera ezenza ukuba zitshintshele kwiimowudi zokujonga ezahlukeneyo kwaye ziqwalasele ukuboniswa kwemaleko. Ikwabonisa ukuveliswa komfanekiso weengxelo.
Proboard Closet Planner yeVidiyo
Iwebhusayithi yeProBoard: https://prodboard.com/closet-3d-online-planner/
I-ClosetCADPro yimveliso ye-3DCADSOFT. Le mveliso sisoftware yesoftware eyenzelwe iinkampani ezibandakanyeka kulwenziwo lokugcina.
Le software yenzelwe ngokukodwa umyili wezentengiso oza kuthi abancede bayile, benze umboniso obonakalayo wabathengi kwaye ubenze bakwazi ukuhlawula amaxabiso kwisisombululo sokugcina kwindawo okanye kwigumbi lokubonisa.
Izibonelelo eziphambili zale software kukuba kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye iyakhawuleza ekwakheni uyilo lwesiko lokugcina usebenzisa umbono we-2d wokuphakama usebenzisa izinto ezichazwe kwangaphambili kunye nezinto ezizezinye ezinokufumaneka kwithala leencwadi leetemplate.
I-ClosetCADPro inokuvelisa ngokulula ixesha lokwenyani elinemodeli yokusebenzisana ye-3D yayo nayiphi na into yokugcina isiko okanye uyilo lwewodrophu olunokupapashwa kwaye lubonwe kwi-Intanethi kwaye lunokudibaniswa nemithombo yeendaba zentlalo.
Le software yenzelwe ukuba ikwazi ukubala ngokuzenzekelayo ixabiso lokuthengisa kuyo yonke le nkqubo kwaye kuba le software ayisosicelo sewebhu esikwi-intanethi, inokuqhuba kwi-PC yedesktop, kwiLaptop okanye kwiThebhulethi yeWindows ngaphandle konxibelelwano lwe-intanethi.
Nangona kunjalo, isebenzisa izixhobo ezikwi-Intanethi kakhulu ukwenza uhlaziyo kwi-Intanethi, ukugcina idatha ukude kunye neenjongo ze-imeyile. IClosetCADPro sisisombululo esinye kuyilo kwisinye sokusebenzisa isixhobo sokuyila.
IWebhusayithi yeCadoset Cad Pro: http://3dcadsoft.com/products/closetcad/
Ngokusisiseko ireferensi yoyilo lwangaphakathi kwi-Intanethi, uyilo lwasekhaya i-3D yinkqubo evumela abantu abathanda izinto zokuhombisa ekhaya, abafundi, abayili bangaphakathi kunye nabanye oochwephesha ukuba benze iyelenqe kunye nokuzoba iiplani zomgangatho kwi-2D okanye kwi-3D.
Yinkqubo ejikeleze yonke indawo engajonganga ngqo ii-closets. Nangona kunjalo, ungayisebenzisa ukucwangcisa ubume bekhaya.
Uyilo lwasekhaya i-3D inenguqulo yasimahla enikezela ngezinto ezingama-200. Ukufumana okunene kule nkqubo uzakufuna iakhawunti ehlawulwayo ebonelela ngeempawu ezininzi njengokugcina kunye nokungenisa ngaphakathi okanye ukuthumela ngaphandle.
Uyilo lwasekhaya i-3D inesixhobo soyilo esenza ukuba umsebenzisi ayile kwaye ahombise ngaphakathi nangaphandle kwekhaya. Isebenziseka ngokulula kwaye ivumela umsebenzisi ukuba ahlele ubungakanani, umbala, indawo kunye nokuphakama kweendonga ngaphandle koxinzelelo.
Abasebenzisi banokuphinda-phinda izinto ngesixhobo sokuyila ikopi kunye nokuncamathisela umsebenzi kwaye banokuhlela ngokungaguquguquki kunye nokwenza kwakhona inqaku. Inesixhobo sokudonsa iliso esinokufumana umbala osele ukho kwisicwangciso kwaye sinako ukungenisa umfanekiso njengobume kwaye siwusebenzise kuyo nayiphi na into okanye into kwisikimu yoyilo.
Enye into ebalulekileyo kukuyilwa koyilo lwexesha langempela le-3D kusetyenziswa ifoto yayo yokwenyani ye-3D.
Uyilo lwasekhaya i-3D ivumela ukungeniswa kweeplani ngokuchaneka ngakumbi kwaye yenza ukuba umsebenzisi ayigcine ngeDropbox, i-OneDrive okanye ngokuthumela uyilo nge-imeyile.
Ukuyila ngoYilo lwasekhaya i-3D, abasebenzisi bayakwazi ukuqhubeka neeprojekthi zabo kwizixhobo ezahlukeneyo ezinje ngee-smartphones, iitafile, i-PC kunye neMac. Ukuyila nokulungisa kwakhona indlu yamaphupha akho noYilo lweKhaya i-3D ilula kwaye inomdla.
Uyilo lweKhaya kwiWebhusayithi ye-3D: https://en.homedesign3d.net/
Uyilo lwasekhaya 3d kwiVenkile yeApple: https://apps.apple.com/app/id463768717
IClosetPro ilula, inomdla, kwaye inamandla isoftware yoyilo esekwe ngaphambili yesoftware iyacetyiswa ukuba isetyenziswe ngabathengisi kunye nabasebenzi bokuthengisa abasebenzisa iinkonzo zokuhambisa izixhobo zekhabethe kunye nabo bathatha ukunikezela iikhabhathi zekhabethe zemodyuli.
Le software ikwangcono ukuba isetyenziswe ngabantu ababandakanyeka kwindawo yokuthengisa abathengayo abadinga isisombululo esilula, kunye nesitsha kwizixhobo zoyilo lwekhabethe.
I-Closet Pro ibonelela ngezisombululo zokugcina i-intanethi kwiinkampani ezinceda abanini bamashishini ukuba bandise ukuthengisa kwaye zinokwenza lula ukuba abathengi batshintshe kubakhenkethi baye kubathengi.
Umama womtshakazi unxiba rochester ny
Isoftware yoyilo lwekhabethe ekwi-intanethi inokudityaniswa ngokulula kwiwebhusayithi yenkampani kwaye ibandakanye ukubalwa kweendleko zeprojekthi kunye nolawulo lwamaxabiso olonga ixesha kunye nokwenza intsebenzo yentengiso yenkampani.
Abathengi banikwa ithuba lokuyila ukufikelela kwabo ngaphakathi okanye ukuhamba-kwi-closet bebodwa okanye banokukhetha kwigalari yoyilo ngaphandle kwesidingo sokufakwa.
Isoftware yeClosetPro inemibala engenamda, igqityiwe, izitayile zomnyango, ukhetho lwebhokisi yedrawer kwaye inokuqhuba amaxabiso esiko kuwo onke amalungu e-closet, ukhetho kunye nezixhobo.
Ngapha koko, ihlaziya kwangoko nje ukuba uyilo lwekhabethe lugqityiwe okanye ukuba kukho iinguqu kukhetho loyilo. Inokhetho apho umsebenzisi anokukhawulezisa ukufakela uyilo lwekhabethe ukuze alingane naziphi na iimfuno.
IClosetPro sisoftware ephendula ngokupheleleyo kwaye inokubonisa uyilo lwekhabethe ngokufanelekileyo nakweyiphi na ubungakanani besixhobo- ukusuka kwiscreen sekhompyuter nakwisikrini esincinci sefowuni efanelekileyo.
Le software ine-3D emangazayo yokusebenzisana evumela umsebenzisi ukuba ahambe ngapha kwekhabethe, atyhile umbono asekhohlo aye ngasekunene kwaye enze ukuba umsebenzisi aphakamise okanye athobe umbono wabo.
I-ClosetPro ikwanayo netekhnoloji yotshintsho lwe-3D enikezela itekhnoloji ebonisa isisombululo esiphakamileyo sokunikwa kwesicelo esithile sokujonga. Lonke unikezelo loyilo lwe-closet lwenziwe kwiiseva ezisekwe kwilifu ikakhulu ezinikezelwe ekwenzeni imifanekiso enikezelweyo.
Nje ukuba imifanekiso enikezelweyo igqityiwe, ikopi yoyilo lwe-closet ithunyelwe nge-imeyile kumsebenzisi, ilungele ukukhutshelwa kunye nokuprintwa.
Le software ikwabonelela ngaphandle kwemali eyongezelelweyo, inkqubo yesindululo sekhabethe ekwi-intanethi enokusetyenziswa ngumsebenzisi ukuthumela uyilo lwekhabhathi kubathengi babo kwaye ivumela abayili ukuba baphawule uyilo lwabo nge logo yabo.
Ividiyo yeClosetPro yeSoftware
Ifumaneka kuhlobo lweshishini, zoba uguqulelo kunye nohlobo lwabanini bamakhaya kwi-Intanethi. Ikhonkco: https://www.closetprosoftware.com/home/ClosetProSoftwarePriceSheetFull.pdf
Isoftware yeCloset Pro: https://www.closetprosoftware.com/
Apha sabelana ngeyona nkqubo yoyilo ikhabethe ihlawulelweyo.
I-Smartdraw yinkqubo yesoftware yoyilo enelayibrari ebanzi yemiboniso esele yenziwe yeekhabhathi kunye nokuqokelelwa kwemizekelo yesicwangciso sekhabhinethi esisiqalo ngokukhawuleza kunye neetemplate ezinokuthi zikhethwe ngabanini bamakhaya kwaye bazenzele ngokwezifiso iimfuno zabo zonke.
Le software ilula kakhulu ukuyisebenzisa kunye ne-interface enobuchule evumela umsebenzisi ukuba arhuqe kwaye alahle uyilo.
Iqonga elisebenzayo, elithembekileyo nelilula ukusebenzisa nokuba ixesha lokuqala kunye nabaqambi beamateur. Abaqulunqi abaziingcali baya kuyifumana le software ukuba ibalasele, kuba banokusebenzisana neqela labo kwaye basebenze kuyilo ngaxeshanye.
I-Smartdraw ibonelela ngeendlela ezimbini zokuqalisa-ngokusayina kuhlelo lwazo lwe-Intanethi lwe-Smartdraw (https://cloud.smartdraw.com/) kuyo nayiphi na ikhompyuter okanye ithebhulethi okanye ngokukhuphela uhlelo lweWindows desktop lwe-Smartdraw.
(https://www.smartdraw.com/downloads/download.htm). Ikwabonisa ukusebenzisana okungazamiyo kunye neqela labaqulunqi abanokusebenza kwiprojekthi efanayo yoyilo ngokwabelana ngokusebenzisa iifayile zokwabelana ngeefayile ezinjengeDropbox, Google Drayivu, Ibhokisi, i-OneDrive okanye wabelane nje ngeefayile nge-imeyile ikhonkco.
Elona candelo lililo lesi sixhobo loyilo livumela umsebenzisi ukuba acwangcise ubume bekhabethe kuyo yonke ikhompyuter, isikhangeli okanye isixhobo esiphathwayo njengeWindows, Mac, Android, iOS okanye naliphi na elinye iqonga elisebenzisa uqhagamshelo lwe-intanethi. Emva kokugqiba uyilo, inokugcinwa njengefomathi yePDF okanye yePNG.
I-SmartDraw ivumela ukwabelana ngeefayile kwifomathi yePDF neyePNG ngeDropbox, OneDrive okanye kuGoogle Drayivu. I-SmartDraw iyahambelana kwizixhobo ezinjengee-PC, iipilisi kunye nee-smartphones kwaye inokusebenza kwi-iOS, Android, Windows, nakwi-Mac.
IWebhusayithi yeSmartdraw: https://www.smartdraw.com/cad/cabinet-design-software.htm
IsiCwangcisi 5D sisixhobo esiphambili nesilula ukusebenzisa uyilo lwasekhaya esenza ukuba abasebenzisi benze uyilo olucacisiweyo lwezicwangciso zomgangatho we-2D kunye noyilo lwe-3D. Inomsebenzi we-Snapshot owenza imifanekiso yeefoto-ebonakalayo enezikhanyiso zokwenene kunye nezithunzi ngokuthe ngqo kuso nasiphi na isixhobo, kwi-Intanethi okanye ngaphandle kweintanethi.
Umsesane wokubandakanya iidola ezingama-6 000
Umcwangcisi 5D uvumela umntu ukuba asebenzise ukusebenza okusisiseko simahla, nangona uninzi lwezona zinto zibalaseleyo zifuna uguqulelo lweprimiyamu.
Ikhathalogu yento eyi-150 + kunye nekhathalogu yokuthungwa engama-600 + ziyafumaneka kuhlobo lwasimahla ngelixa inguqulelo yepremiyamu inekhathalogu yento engama-3000 + kwaye ivumela umsebenzisi ukuba atshintshe ubungakanani nokubonakala kwayo yonke ifanitshala.
Isicwangcisi 5D sibandakanya ukuhlelwa kwento apho abasebenzisi banokufaka khona imibala ngokwesiko, iipateni kunye nezinto zefanitshala, iindonga kunye nemigangatho. Ivumela abasebenzisi ukuba batshintshe phakathi kweetriki kunye neenkqubo zobukumkani zemilinganiselo.
Oku kufanelekile kuye nabani na ojonge ukwenza iprojekhthi yangaphakathi enje ngendawo yekhabethe, igumbi lokulala, ikhitshi, igumbi lokutyela kunye nezinye iiprojekthi zangaphandle ze-DIY.
Umcwangcisi we5D weVidiyo
Inkqubo yokusebenza ekhuthazwayo yiXbox One, Windows 10 inguqulelo ye-14393.0 okanye engaphezulu.
Umcwangcisi wewebhusayithi ye-5D: https://planner5d.com/
Esi sixhobo sokuyila sicetyiswa kakhulu kubaqulunqi bobuchwephesha kunye nabavelisi beekhabethe kwizisombululo zokugcina ezothusayo. Inkqubo inexabiso eliphakamileyo lexabiso eliqhutywa nge- $ 1995 yenguqulo epheleleyo.
IiMicrocad Autoclosets zivumela abayili kunye nabenzi ukuba babandakanye kwaye basebenzisane nabaxumi babo kuba abasebenzisi banokufaka ngokulula zonke iinkcukacha ezizezinye zeemfuno zabathengi babo kuyo yonke inkqubo yoyilo.
Ivumela abasebenzisi ukuba bakhethe kuthotho lweenketho zoyilo kwaye ivumele umsebenzisi ukuba enze ikhemetri okanye izikimu zoyilo lweewodi ngexesha lokwenyani.
Ii-Autoclosets zeMicrocad zibonisa unikezelo olunemibala lwe-3D enezinto ezenziwe ngokwezifiso, imibala kunye neziphumo zokukhanyisa kwimiboniso yokwenyani yeefoto. Inokuvelisa ingxelo equkethe lonke ulwazi olufanelekileyo lobuchwephesha ukuze kuveliswe ngokufanelekileyo ikhabhathi.
Le app inokudibaniswa nenye insiza evela kumdali ofanayo, njenge-autodecco kunye ne-autokitchen.
Iwebhusayithi yeMicrocad Autoclosets: https://en.microcadsoftware.com/productos/autoclosets/autoclosets.php
Akukho software yoyilo lwe-closet ilungele lonke uhlobo lomntu. Nokuba ungumqambi we-novice okanye u-pro, kunye nenqanaba lokusebenza olifunayo kuya kunceda ukufumanisa ukuba yeyiphi inkqubo ekulungeleyo.
Njengomgaqo oqhelekileyo wesithupha ukuba ungumqali ofuna isiseko esilula sokuthatha kunye nokusebenzisa inkqubo yoyilo lwekhabethe nazi ezinye iindlela ezilungileyo.
Isimahla kwaye kulula ukuyisebenzisa:
# 1 iiClosets ezilula
# 2 Isixhobo soYilo seCloset eVenkile
Isixhobo se # 3 seDepho yasekhaya
Eyona App ilungileyo yeApple Iphone / Ipad:
Eyona App ilungileyo ye-Android
# 1 isiCwangcisi seCloset 3D
Eyona Ndawo iNkqubo yokuYilwa koBume
# 2 Isicwangciso 5D
Uhlelo lokusebenza oluthandayo lonke ixesha phakathi koluntu loyilo yi-SmartDraw- le yisoftware yasimahla evumela umsebenzisi ukuba azame ngeendlela zobuchule bokuyila kwaye anike iprojekthi yoyilo ukubukeka kobungcali.
Enye yezona nkqubo zibalaseleyo kwi-Intanethi zeengcali ziiMicrocad Autoclosets ezenziwe nguMicroadd, abenzi besoftware yoyilo lwekhabethe.
Ndwendwela eyethu Ukuhamba-ngaphakathi kweekhabethe izimvo igalari yomxholo onxulumene noko.
enkosi amakhadi ngomtshato
izipho zodade omtsha
unganxiba ezimhlophe kwishower yomtshato